सञ्जीव पौडेल - sanjeeb pokhrel | Nagarik News - Nepal Republic Media
सञ्जीव पौडेलका लेखहरु :
हिजोका तिम्रा तिनै वैरी आज तिमीलाई भरपर्दो सुरक्षा दिइरहेछन्। तिम्रा तिनै आँखाले हिजोको मेरो दरबारलाई गोठ देखिरहेछन्।
सञ्जीव पौडेल १५ श्रावण २०७७ बिहीबार १ मिनेट पाठ
आमाका आँखासँग उसका आँखा जुधेपछि ऊ एकाएक छाँगाबाट खसेझैँ भयो। काँस फुलेझैँ रङ्गहीन बनेकी आमालाई देखेपछि ऊ सम्हालिन सकेन। ऊ तुरुन्तै भकारीभित्रको जेलमा छि-यो र थचक्क बस्यो।
सञ्जीव पौडेल १० श्रावण २०७७ शनिबार ९ मिनेट पाठ
सञ्जीव पौडेल ५ श्रावण २०७७ सोमबार १० मिनेट पाठ
अयोग्य विद्यार्थी, योग्य शिक्षक ?
सरकार शिक्षाशास्त्र पढेकालाई मात्र शिक्षक बन्ने अबसर दिन्छ। विश्वविद्यालयका अन्य संकायमा अध्ययन गर्न अयोग्य विद्यार्थी शिक्षाशास्त्र पढेकै आधारमा देशको ‘योग्य’ शिक्षक बन्छ। हिजोको अयोग्य विद्यार्थी आज योग्य शिक्षक बनेर विद्यालयमा प्रवेश गर्छ भने देश स्वतः बिग्रिन्न?
सञ्जीव पौडेल २० असार २०७७ शनिबार ११ मिनेट पाठ
बालकविता सुनाउने ‘महानायक’
जनता रोगको त्रास र भोकको अत्यासमा छट्पटिइरहेका बेला सिंहदरबारको कुर्सीमा कविता कोरल्न ओथारो बस्ने होइन । बूढो गोरुले भकारो ओगटेझैँ देशको सर्वोच्च कुर्सी ओगट्ने अनि जनतालाई आहतमा राखेर गीत सुसेलेर बस्ने ?
सञ्जीव पौडेल ३० जेष्ठ २०७७ शुक्रबार १३ मिनेट पाठ
सञ्जीव पौडेल १२ जेष्ठ २०७७ सोमबार ९ मिनेट पाठ
सञ्जीव पौडेलका अरु समाचारहरु खोज्नुहोस्